Nei Iyo Indasitiri Yemuvhi iri Kutadza | Martech Zone
Nei iyo Indasitiri yeMuvhi iri Kukundikana
Svondo, Zvita 18, 2005 Chipiri, Gunyana 21, 2014 Douglas Karr
Ini nevana vangu takaenda kunoona King Kong nezuro. Iwo akasarudzika mhedzisiro uye makomputa-akagadzirwa giraidhi aive akanyatsonaka. Ini ndinofunga iyo bvunzo yechokwadi yemuvhi (zvinoenderana nezvakakosha zvinoitika) ndeyekuti iwe unozviwana uchinzwira tsitsi necomputer inogadzirwa hunhu. Kong, zvirokwazvo, aive nehunhu hwake. Ndakafunga kuti magumo aive mashoma hokey uye haana kuenzana nekusuwa uye kusimba kwekurova kwemoyo kunopera mushanduro yekupedzisira… asi kutasva kwacho kwanga kuchiri kunakidza.
Ndakatora shamwari mbiri dzevana vangu seniwo saka iyo 2+ maawa akandibhadharisa zvakati wandei. Kutyaira kumitambo yemitambo maminetsi makumi maviri bhaisikopo risati ratanga, vana vangu vakatanga kugomera nezve kunonoka uye zvigaro zvataizozviwana tiri. Ndakaseka zvakare kuti isu taizotanga kugara kuburikidza ne "Best-Buy-sponsored-turn- yako-cell-phone-off-idiot movie ", kuongororwa kweX-Men 3, chinwiwa-chidhakwa uye nacho (nechizi inozoitisa kuburikidza neAmagedhoni) yekutengesa, uye gumi nemana ekuratidzwa kwemafirimu ari kugadziridzwa.
Zvakazoitika zvakazoita kuti vana vangu vafunge kuti ndiri muporofita. Yakanga isiri X-Men 45, yaive X-Men 3. Poseidon, remake yeinotyisa Poseidon ushingi, Miami Vice, uye tarira uone ... kubiwa kwebhangi (pamwe nekumonyoroka) bhaisikopo naDenzel Washington.
Izvozvo munhu zvimwe zvinoshamisika kuti nei Movie Indasitiri iri kuyamwa? Vanoshamisika zvechokwadi here? Chaizvoizvo? Ndiri munzira yekuona King Kong 3 (kana iwe ukasvetuka Mighty Joe Young), ini ndinoona chiratidzo cheMiami Vice (isina Don), Poseidon 3 (kana iwe ukaverenga vhezheni yeTV mavhiki mashoma apfuura), X-Men 3, uye bhanga rekuba bhanga ????
Dambudziko neiyo Movie Indasitiri ndeyekuti ikozvino yazvino 'indasitiri' yepamutemo. Iyo indasitiri ine chitsama chekaka dzakakora dzakagara dzakakomberedza tafura yaishandiswa kugadzira bhiriyoni emadhora uye vanotya kubheja pane chero chinhu kunze kwechokwadi kuhwina.
Vanoti avo vasina kudzidza nhoroondo vakatemerwa kuidzokorora. Ndiri kutanga kufunga kuti hapana muAmerica anodzidza nhoroondo zvekare. Nyika ino yakavakirwa pakutenda nenjodzi. Nditsvagire kambani yakaigadzira, uye vimbisa kuti vane dzimwe nyaya huru nezvekuti vanga vari sei inchi kubva mukuparadzwa kwakazara.
Iyo Movie Indasitiri inoda 'kupatsanura portfolio yayo' kana ichinyatsoda kuzviita. Chokwadi ... enda kune iri nyore mari ne Shrek 5, Rocky 10, nezvimwe. Asi tanga kupa mari yakawanda 'kutanga-kumusoro'. Mukadzi weshamwari yangu yepamwoyo akaburitsa bhaisikopo muna2004, inonzi Munhu Anonzwa Kurwadziwa iyo yakagamuchira Bravo! mubairo kuToronto Firimu Mutambo… iwe ungafunga kuti vanhu vari kurovera pasi musuwo wake kuti vauye neimwe tarenda!
Kwete…. Ini ndinofungidzira taida Miami Vice naPoseidon.
Tags: Varaidzo / Tsikaindasitiri yemafirimu
Chii chako Bailiwick?